7 Sincinane Ayaziwa Beautiful zokufikela To Visit EYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 7 Sincinane Ayaziwa Beautiful zokufikela To Visit EYurophu
7 Sincinane Ayaziwa Beautiful zokufikela To Visit EYurophu
yi URishab Jain
Qeqesha ukuhamba iOstriya, Uloliwe wokuhamba eBelgium, Qeqesha uhambo eFinland, Uloliwe eSweden, Travel Europe
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 12/12/2020)
Europe, ilizwe elihle nokubengezela kunye iintsomi zixoxwa ngokungathandabuzekiyo hamba-ukuya kuyo ukuze zonke iindawo Umthandi apho phandle. Nge kuhambe iindawo SICHUKUMISEKA Awakening ukuba kutyelelo, naseYurophu kwaziwa ukuba enye elihle phesheya iBhhunga ukufunda kubafundi International njengokuba abe nyambalala yeminikelo abangabalekiyo kumanxweme, iziqithi, izigodlo, iinqaba, ezikhumbuzo zembali.
Nangaphandle kwamathandabuzo imizi ezifana eRoma Paris imizi kufuneka utyelelo ngexesha voyaging nge Europe, kodwa ukuba omnye wabo bantu owoyamaniswe ekukhangeleni i Sincinane Ayaziwa Beautiful zokufikela kunye unandipha zonke ounce ubuhle ubuncwane obufihliweyo, olu luhlu nje wena!
Ngako oko ukuba uthe, nokufunda egudle ukuze atyhile 7 iindawo understated eYurophu ukuba ezinhle kwaye uya spike ukuba rush iadrenaline nifuna.
1. Sincinane Beautiful zokufikela Laziwa – Valletta, Maltha
Valletta na phakathi Laziwa Beautiful zokufikela izixeko incinane Njengomncinane yehlabathi kwaye likhaya zasebukhosini, zinqaba, kunye icawa ukuba umhla umva kwinkulungwane ye-16. Esi sixeko ngokupheleleyo i World Heritage Site njengoko sibaluleke kakhulu ngenxa likhathazekile zembali zabanjwa
ngawo. Iqela elingcono malunga ne ngokuxilonga Valletta kukuba olawula ngeenxa zonke ndawo akukho msebenzi ezintsonkothileyo ukwenza njengoko usingasiqithi kwanele mancinane aza kuhlawulwa ngokupheleleyo unyawo. Ezinye izinto ezinkulu soze miss ngoxa Valletta unguye Upper Barrakka Gardens and Casa Rocca Piccola ukuba ilifa iimbono ubuya kufa ngenxa!
2. Salzburg, Ostriya
Salzburg ukwakweli kumda Germany, kwilizwe lase-Austria, kwaye ayikho ukugonwa yi enkulu eMpuma Alps ukuba ngokwenene amehlo abonayo. lo emangalisayo kunye Njengomncinane Ezaziwayo Beautiful zokufikela sixeko kuzalwa onjengokaMozart, umculo yomqambi owayedume, kabani
izixhobo nobuntwana liyalondolozwa neboniswe imyuziyam. Ngaphandle kwayo ezibalulekileyo ezimbalini, umzi lo ezihonjiswe ezimbejembeje izakhiwo unakho - i style imigodi ukususela ngenkulungwane ye-17 ekuqaleni yaye wahlulwe Salzach umlambo, leyo eyenza ukuya kulo mzi kukho ixesha zehambo yobudala ephakathi!
Munich ku Salzburg Uqeqesha
Vienna ku Salzburg Uqeqesha
Graz ku Salzburg Uqeqesha
Linz ku Salzburg Uqeqesha
3. Constanta, Romaniya
Yintoni kanye kwisixeko esingasebenzi, I-Constanta okwangoku yeyesithathu ngobukhulu eRomania sixeko kunye nenye Njengomncinane Yaziwa Beautiful zokufikela eYurophu kunye laseTrowa umsindo emi phezu komlambo elisentshona oLwandle Omnyama.
Constanta likhaya ku zobungqina ezininzi ibheka kwabakhenkethi umva ukuya kweleshumi ukuya ngekhulu, kuquka i uOvid Square, apho kukho umfanekiso oqingqiweyo wobhedu wegcisa yaseRoma uOvid umi, kwaye iyeka Constanta Casino, leyo kunazo zonke sesakhiwo Art Noveau. Ngokufanayo Constanta uye mhlawumbi seashores kakhulu esimnandi, apho wena ufumane ithuba ilanga, ndiwuthukulule phezulu. Xa ngaba ufumene entsha ngqondo, nazi uhambo ngosuku multi e Constanta, ezibandakanya ukuhambela ezimbini UNESCO Heritage Sites ezizezi iDanube and Tulcea kunye kuthoba ekupheleni kwi edumileyo resort beach, Mangalia.
4. Sincinane Beautiful zokufikela Laziwa – eGhent, Bheljiyam
Efihliweyo phantsi kwamathunzi zonke zoluntu langutana ngakumbi Belgian ezidolophini ezifana Antwerp and Brussels, EGhent i gem efihlakeleyo e Belgium. Nemizi umdla kwaye kangako disorder, EGhent encinane ngokwaneleyo ukuze uzive ukhululekile kunye ngokwaneleyo kakhulu Spice ulwazi lwakho. Ukuba babekuthanda yeemyuziyam ezintle, imivalo ezithandwayo, kunye nemibono side emisele, wena ngokuqinisekileyo uya ufuna ukongeza eGhent ukuba uhambo lwakho isicwangciso-hambo. Inxalenye iindawo nguwuphi na ngoyaba kubandakanya Gravensteen, zemizi kwekhulu seshumi-anemijelo kunye nemibono ezimangalisayo, iBelfry yaseGhent, kwaye i St Baro Cathedral.
Zilungiselele ukuba nomdla raveled iziseko eye wema uloliwe ixesha uze wenze iikhamera zakho bopha phantsi le ukukhetha Beautiful zokufikela Njengomncinane Ukwaziwa eYurophu.
EBrussels ku eGhent Uqeqesha
Antwerp ku eGhent Uqeqesha
Halle ku eGhent Uqeqesha
Bruges ku eGhent Uqeqesha
5. Helsinki, Finlend
Ezigciniwe kwimida ye kwiBaltic, Helsinki sisixeko yaseYurophu esimele ukuhlola. Egcwele ezintsha, EHelsinki waba World bokwakha Capital for 2012. indlela yabo yokuphila ukuze uyancomeka, ukuba ningazami ukuba nibasekele ujoyine abhadulayo Utyelelo emhlabeni kwindawo zibase ukufumana ubutyebi bembali kwesihloko Finnish.
Cinga kutyelela eHelsinki ngexesha ongunaphakade yayo iintsuku zasehlotyeni sandise ixesha wakho okanye unxibe iibhutsi zakho gutsy ulwe basebusika inqwaba. Nangeyiphi ndlela, kukho enjalo amanani amakhulu izinto ukuze ubone, akuyi kuba ukhetho ukutyhila ngokupheleleyo wonke mfihlakalo eziwudibanisayo!
6. Gothenburg, Swiden
Gothenburg, ise Sweden, likhaya park Liseberg yokoNwabisa, enye ye Iindawo ezinika umdla zotyelelo aphezulu kule uhlanga nakuba engomnye Beautiful zokufikela Njengomncinane Aziwe. Kubalulekile kwakhona isixeko yesibini ngobukhulu kweli lizwe leyo ngaphaya ezihlekisayo ngenxa nobandakanyeko yalo zombini umhlaba nolwandle kwemi- yayo amagama afana "Fika" (a Concept lokuba ikhefu coffee) no Feskekorka (fish ibandla) Zama ukutyelela kulo mzi Agasti ukuba ubungqina umculo umthendeleko yazo emangalisayo eyaziwa ngokuba Way Out West. Akunakwenzeka ukuba atyelele ngeli xesha? Le emzini nangona kunjalo azenze iyamkholisa yonke ingqondo yakho sceneries amahle,
ukudla finger uzibandakanya, kunye nezitalato akhuthazayo. Ukuze phezulu it, zizula kuyo umzi kungenziwa ekunene kwi unyawo lwakho leyo ethetha ukuba ugcine kwimali abahambahambayo kwi efanayo kuxhamla ephatha zentlalo nenkcubeko lo mzi limangalisayo kumele anikele.
7. Sincinane Beautiful zokufikela Laziwa – Umehlulelwano, Khroweyishiya
Ukwahlula eCroatia yindawo efanelekileyo eyaziwa njengeNdawo eNcinci yeholide ukuba uzingela into eyenzekayo yokuxubana isixeko lonxweme kunye vibes Mediterranean obandayo. Cuisine lweDalmatia apha oluhambisana kwaselwandle fresh uya ukuphululwa ingqondo yakho uze ufumane ngamadolo akho!
Further, Ukuthanjiswa kwi Kastelet elunxwemeni kwenza umahluko kuni uxinezeleko nixhase wena babethunywe ngaphakathi. Ukuba ufuna ixesha elithile nentuthuzelo, ungakwazi ukuthatha ukukhwela wokuweza ukusuka apha Hvar, isiqithi ibekwe ngaphantsi kweeyure ezimbini ukusuka kwisixeko. Konke kwinto enye, Umehlulelwano i iphakheji epheleleyo wena ngokuqinisekileyo kufuneka uhlole!
ke, yintoni na le nto nilindele? Cwangcisa uhambo lwakho ecaleni kwenye yezi zokufikela Njengomncinane Laziwa Beautiful nge Gcina A Isitimela ejikeleze loo mizi ezithandekayo kwaye Siya kubulela kuthi kamva, Happy ahambe!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Flesser-known-beautiful-destinations%2F%0A%3Flang%3Dxh- (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, kwaye bangatshintsha iilwimi / ts ukuba / fr okanye / de yaye ngaphezulu.
My passion and interest is in the digital landscape and this motivated me to create an online startup for focused on spreading quality information. During business hours, Rishab is the chief Business Development Manager and a Digital Marketing professional - Unako cofa apha ukuze Qhagamshelana nam
Obude Train amade The World
Uhambo loLoliwe, Qeqesha ukuhamba iOstriya, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe Ukuhamba ngeLuxembourg, Uloliwe eSwitzerland, Train Travel The Netherlands, Iingcebiso zokuhamba, Travel Europe